पहिलो पटक आर्थिक गणना शुरु «
पहिलो पटक आर्थिक गणना शुरु
मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिको सही तथ्यांक उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित शनिबारदेखि आर्थिक गणना शुरु भएको छ । पहिलो पटक हुन लागेको आर्थिक गणनाको सम्झनामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बनाएको आर्थिक गणनाको स्तम्भको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शनिबार एक समारोहबीच उद्घाटन गरेका छन् । स्तम्भ अनावरणसँगै राष्ट्रिय आर्थिक गणना औपचारिकरूपमा आरम्भ भएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । जापानी सहयोग नियोग जाईकाको सहयोगमा शुरु गरिएको गणना आगामी जेठ ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।
विभागले ३ हजार ५ सय प्रशिक्षित गणकको सहयोगमा वैशाखको शुरुदेखि जेठ महिनाको अन्त्यसम्ममा देशका सबै ठाउँमा हुने गरेका आर्थिक क्रियाकलापको गणना गर्ने तयारी गरेको छ । जापान सरकारको प्राविधिक सहयोगमा हुन लागेको आर्थिक गणनाले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने अनौपचारिक क्रियाकलापको वास्तविक आँकडा बाहिर ल्याउने विभागको अपेक्षा छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पहिलो पटक गर्न लागिएको आर्थिक गणनाको सरकारलाई दिगो आर्थिक विकासका लागि चाहिने बलियो नीति बनाउन सहयोग गर्ने बताए । “सरकारको हाल रहेका तथ्यांंक अलग–अलग प्रविधि र अनुसन्धान विधिबाट तयार गरिएकाले सरकारकै तथ्यांक फरक–फरक देखिने गरेका छन्,” मन्त्री खतिवडाले भने “तथ्यांकहरू एक आपसमा बाझिएपछि त्यसप्रतिको विश्वसनियता कम भएको भएको छ ।”
कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले आर्थिक गणनाका तथ्यांक सर्वाेपरी हितमा प्रयोग हुने भएकाले गणना आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव शरदचन्द्र पौडेलले आर्थिक गणनाले अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई समावेश गर्ने भएकाले गणनामा सम्भव भएसम्म सत्यतथ्यहरू मात्र समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
विभागका अनुसार गणनामा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित करिब १५ क्षेत्र समावेश गरिने छन् । जसमा उद्योग, ब्यापार, पर्यटन, विकास निर्माणलगायतका क्षेत्र रहने विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए । यी बाहेक समग्र आर्थिक परिसूचकको सही र सुक्ष्म अध्ययन गर्ने विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार गणनाको पहिलो चरणमा प्रमुख शहरी क्षेत्र हुनेछन् । त्यसैगरी इन्टरनेटको पहुँच रहेका मुख्य क्षेत्रमा अध्ययन गरिने छ । त्यसपछि अन्तिम चरणमा बाँकी रहेका स्थानमा गणना गरिने छ ।
विभागले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म योजना तर्जुमा र नीति निर्माण गर्न भन्दै आधारभूत आर्थिक तथ्यांक उपलब्ध गराउन, मुलुकको राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न सहयोगका लागि सम्बन्धित क्षेत्रसँग आग्रह गरिसकेको छ । “व्यवसाय समृद्धिका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न एवं अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तथ्यांक उपलव्ध गराउनुनै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,” विभागका महानिर्देशक अर्यालले भने, “यसका लागि हामीले उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता र प्राज्ञिक अनुसन्धानकर्ता तथा अन्य तथ्यांक प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरिसकेका छौं ।” उनका अनुसार गणनाका लागि ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको र प्रशिक्षणका कामसमेत सकिएको छ । अत्याधुनिक प्रविधीबाट गणना गर्न लागिएकाले ३ महिनासम्म अर्थात् सन २०१८ को मध्यसम्ममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेे तयारी छ । “हामीले औद्योगिक गणनाकै मोडलमा आर्थिक गणना सुरु गर्दै छौं, यसमा पनि समग्र अर्थतन्त्र समेटने गरी १५ क्षेत्र छुट््याइने छ र तीनैमा आधारित रहेर सर्वेक्षण गरिने छ,” अर्यालले भने । उनका अनुसार विभागले डाटा सर्वेक्षणका लागि पहिलोपटक ट्याब्लेट मोबाइल प्रविधिको प्रयोग गर्दै छ । मोवाइल प्रविधिले डाटाको विश्वसनियता हुने विभागको दाबी छ । नेपालमा अहिलेसम्म समग्र आर्थिक क्षेत्रको गणना नहुँदा तीन वर्ष अघि गएको भूकम्प र ५ महिना लामो नाकाबन्दीको असरले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे सही तथ्यांक आउन सकेको थिएन । साथै हरेक दिन हुने गतिविधिबारे पनि अध्ययन नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रको डाटामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको भन्दै विभागले आर्थिक सर्वेक्षण गर्न लागेको जनाएको छ । यसरी गरिने गणनाले जिडिपीमा समेत सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
नेपालमा हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य निकायले क्षेत्रगत रूपमा मात्रै डाटा संकलन गर्दै आएका छन् । पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिको सहयोगले गर्न लागिएको तथ्यांक संकलनले गल्ती न्यून हुने विभागको दाबी छ । “यो तथ्यांकले आर्थिक ब्रेन्चमार्क खडा गर्न सघाउ पु¥याउने छ,” उनले भने “सही र ताजा तथ्यांक आम जनता समक्ष पस्किन सक्नेछौं ।” पहिलो पटक हुन लागेको आर्थिक गणनाले मुलुकभरको समग्र आर्थिक इकाई र गतिविधिको अवस्था जानकारी दिने बताइएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको अवस्थामा स्थानीय स्रोत साधानको पहिचानले समग्र अर्थतन्त्रको सही तथ्यांक लिन सकिने विभागको दाबी छ ।